DEG-DEG:-Kenya Oo Gil-gilanaysa Iyo Mucaaradka Oo Gadoodsan. – Warsan iyo Weeedh Saxsan oo Sugan.
Nairobi(FMN)—Xaalada Ammaan ee dalka Kenya ayaa umuuqata mid faraha kasii baxaysa kadib markii Xisbiga Mucaaradka ah ee NASA iyo taageerayaashiisa ay qaadaceen Doorashada ku celis ka ah ee lagu wado in ay maalinimada berrito ah ka qabsoonto dalkaasi.
Hoggaamiyaha Mucaaradka Kenya Mr;Raila Odinga oo goor dhawayd lahadlayay taageerayaasha xisbigiisa ayaa ku baaqay in la qaadaco doorashada berri dhacaysa,Isaga oo sidoo kalena ku dhawaaqay in Xisbigooda ay u badeleen dhaq-dhaqaaq wax iska caabin ah(Resistance Movement),wacadna ku maray in ay soo dhacsanayaan xuquuqdooda dastuuriga ah oo ay ka adkaani doonaan Madaxweyne Uhuru iyo Ku xigeenkiisa Rutto.
Raila ayaa sidoo kale taageerayaashiisa ku dhiira geliyay in maalinta berri ah ay guryahooda joogaan kana fogaadaan goobaha cod bixinta,si buu yidhi looga hortago wax uu ugu yeedhay xasuuq uu xisbiga talada hayaahi dadkiisa la maaganyahay.
Durbaba waxaa bilaawday bannaanbaxyo rabshado wata ayada oo taageerayaal cadhaysan ay soo buux dhaafiyeen wadooyinka magaalooyinka qaar.Dibad baxayaasha ayaa taayeero ku gubaya jidadka iyo wadooyinka ayagoo xannibay isu socodka dadka iyo dhaq-dhaqaaqa gaadiidka iyo ganacsigaba.
Lama hubbo waxa ay xaaladu ku danbayn doonto,waxaana aad looga cabsi qabaa in dalku uu faraha lagalo qalalaase iyo qul-qulatooyin siyaasadeed oo sababi kara in ay isku dhacaan qabaa’ilka kala duduwan ee dalkaasi ku dhaqan, si lamid ah sanadkii 2007da oo rabshadihii ka dhashay doorashadii xilligaasi la qabtay ay dhiig badan ku daateen dad badana ku wax yeeloobeen.
Si kastaba ha ahaatee,xisbiga talada haya ee Jubile ayaa ku adkaysanaya in maalinta berri ah dadku ay udareerayaan doorashada ku celinta ah oo ay codkooda dhiiban doonaan,islamar ahaantaana aan dheg jalaq loo siini doonin dhawaaqyada kasoo baxaya kooxaha mucaaradka ah ee iyagu kasoo hor jeeda in doorasho ku celis ah la qabto ka hor inta aan si buuxda loo fulinin dalabyadooda.
Previous Previous post: Madaxweyne;Farmaajo Oo Dalka Dib Ugu Soo Laabtay.
Next Next post: Yuusuf Garaad Oo Ka Warbixiyay Socdaalkii Madaxweyne;Farmmmaajo.